Tababare Solskjaer Iyo Pogba Oo Wadahadlay – Maxaa Dhex Maray? – Garsoore Sports
Tababare Solskjaer Iyo…
Xiddiga khadka dhexe ee xulka qaranka France ayaa ku jira qaab cayaareed aad u fiican todobaadyadii ugu dambeeyay.
Tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa shaaca ka qaaday inuu wada hadal furan oo daacadnimo ah la yeeshay Paul Pogba.
Cayaaryahanka heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa diirada u saarnaa saxaafada xilli cayaareedkan, gaar ahaan hadalada wakiilkiisa Mino Raiola, kaasoo sheegay inuu doonayo inuu Pogba uu ka saaro Garoonka Old Trafford ee kooxda Manchester United.
Tan iyo markii uu Raiola sameeyay faallooyinkiisa qarxay bishii Diseembar, qaab cayaareedka Pogba ayaa noqday mid il-qabad leh, isagoo ku raaxeeysanaya khadka-dhexe ee kooxda Man United.
Solskjaer ayaa ku kasbaday amaan inuu soo saaray qaab-cayaareedkii ugu wanaagsanaa ee cayaaryahankii hore ee kooxda Juventus, isagoo soo jeediyay in wada hadalada dhexmaray labadooda uu qeyb weyn ka qaatay xaalada Paul Pogba.
“Shaqada Paul waa inuu taam noqdo oo uu cayaaro kubbada cagta,” ayuu yiri Solskjaer.
“Shaqadaydu waa inaan u furfurnaado oo aan daacad u ahaado islamarkaana aan siiyo taladayda waligeyna wax dhibaato ah kuma qabin isaga.”
“Waxaan si furan oo toos ah ula hadlaa Paul. Ma doonayo inaan cidna u sheego waxa aan isaga kula taliyo laakiin marwalba waxaan leenahay xiriir wanaagsan.
“Wuxuu ka yimid qoys weyn, waa mid la fahmi karo, waa wiil caqli badan wuuna garanayaa waxa aan ka hadlayo markaan hadlayno.”
Pogba ayaa lagu dhaleeceeyaa inuusan waxba kusoo kordhin kooxda United, laakiin Solskjaer ayaa sheegay in taasi aysan aheyn kiiska, wuxuuna sheegay in ninka luuqadaha badan ku hadla ee reer France uu ka shaqeeyo daaha gadaashiisa si uu uga caawiyo kooxda inay hore u socoto.
Solskjaer ayaa yiri: “Waxyaabaha dadku aysan ku arkin Paul waa xitaa marka uusan cayaareynin inuu wax weyn kusoo kordhiyo kooxda”
“Mararka qaar xitaa wuxuu u dhaqmay sidii turjumaan – xitaa marka uusan cayaareynin.”
Paul Pogba ayaa dhaliyay goolal kooxdiisu guul u horseeday labo ka mid ah seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee United, waxayna u badan tahay inuu qeyb weyn ka ciyaari doono marka Red Devils ay martigeliso Liverpool wareega affaraad ee FA Cup Axada (Maanta).
Labada koox ayaa kulankii ugu dambeeyay ee ay wada cayaaraan barbaro goolal la’aan 0-0 ah ku kala baxay Cayaar Premier League ah oo isbuucii hore ka dhacday Garoonka Anfield ee kooxda Liverpool.
Dembele Oo Premier League-ga Kusoo Wajahan, Brendan Rodgers Oo Lampard Lagu Bedelayo, Dagaalka Loogu Jiro Upamecano Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa
“Odegaard Wuxuu U Ceeboobi Karaa Sidii Suarez” – Saxiixa Ay Arsenal Ku Dhowdahay Oo Durba Laga Deyrinayo